Kulan lagu xasuusanayay Taariikhda Halgame C/laahi Ciise oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Kulan lagu xasuusanayay Taariikhda Halgame C/laahi Ciise oo Muqdisho lagu qabtay
Isku imaadkan lagu xasuusanayay Allaha u naxariistee Halgamaagii Qaranka Soomaaliyeed Kalinta Weyna ka soo qaatay Gobnima doonkii Umadda Soomaaliyeed Marxuum Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo Waqtigii uu geeriyooday laga joogo mudo 27 sano ah ayaa waxaa uu ka qabsoomay Magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay Xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda Xukuumadda Soomaaliyeed mas’uuliyiin hore iyo dad ay mudo soo wada shaqeeyeen Marxuumka.
Sheekh Cabdi Shukri waxaa uu ka mid yahay xubnaha ay soo wada shaqeeyeen aqoon dheern a u leh halgamaagii Soomaaliyee Cabdulaahi Ciise oo Bulshada Kulankaan ka qayb gashay ay iksu raaceen in uu ahaa Aabihii Halgankii gobonimo doonka Soomaaliyeed waxaa uu ka hadlay taariikhdii marxuumka inta uu ka xasuusto.
Mudane Cali Ismaaciil Cabdi Giriig oo Wasiir ka soo noqday mid ka mid ah dowladihii dalka soo maray ayaa waxaa uu sheegay in Taariikhda Halgamayasha iyo Dadka Magaca ku dhex leh Bulshada loo baahan yahay in Maamuus loo sameeyo oo Taariikhdooda kor loo qaado isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in Goobaha waxbarashada aan da’yarta lagu barin taariikhda dalka iyo Halgamayaasha Gobanimodoonka.
Munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arimaha dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Cali Kadiye iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo iskaashiga Caalamiga ah Prof Cabdulaahi Sheekh Cali Qaloocow iyo Xubno kale .
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Mr Qaloocow ayaa waxaa sheegay in Muhiim ay tahay in Dadka Magaca ku dhexleh Bulshada ay yeeshan Astaamo lagu xasuusto oo loogu magacdaro Taariikhda Marxuum Cabdulaahi Ciise Maxamuudna aysan ahayn wax la soo koobi karo.
Cabdulaahi Ciise Maxamuud waxaa uu ka mid ahaa Dhalinyaradii Halgamayaashii Gobanima doonka Soomaaliyeed SYL oo uu ka ahaa Xoghayaha Guud Waxaa uu uu door Muuqda ka soo qaatay dadaaladii Xisbigaasi uu ugu jiray in Soomaaliya Qaran Madaxbanaan noqoto xilal kala duwan ayuuna ka soo qabtay Dowladihii rayidka ahaa Dowladii Kacanka ayaa u Magacawday Safiirka Soomaaliya Ee Swiden 1988 dii ayuuna ku dhintay Magaaladda Roma Ee Dalka Talyaniga .